Umphathi Wekhefi Yekati - Shintsha Usuku Lokukhishwa, I-trailer, nokuningi! - Ukudlala
Umphathi Wekhefi Yekati - Shintsha Usuku Lokukhishwa, I-trailer, nokuningi!
Indaba Yomphathi Wekati Cafe
Idethi yokukhishwa komphathi we-Cat Cafe
Kungenzeka yini ukuthi wenze i-catpuccino engcono kakhulu? Uma kunjalo, I-Cat Cafe Manager ingakufanelekela. Phatha ikhefi yakho yekati ngenkathi ulungiselela ama-meowchas futhi uphakela izinyamazane kulo mdlalo wevidiyo wokulingisa wokuphatha.
Nokho, ungakuvumeli lokho kukuvimbele ekuhloleni lo mdlalo othakazelisayo. Kuyokugcina up futhi uhlanganyele njengekati eline-caffeine kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani.
Ngemva kokuthola ikhefi yekati kugogo wakho, kuwumthwalo wakho njengomnikazi wendlu yekhofi yaseCaterwaul Village ukubuyisela ukusungulwa ebukhazikhazini bayo bangaphambili kanye nenzuzo.
Uqasha abanakekeli bekati abasha ku-hamlet, kanye nabasebenzi abasha abalindile abavela endaweni ezungezile, ukuze bavuselele ikhefi yokuguga kagogo. Uma ucabangela konke ukuhlikihla kwesisu, kuwumsebenzi onzima, kodwa othile kufanele awenze.
I-Cat Cafe Manager inemiphumela ecacile yethonya lemidlalo efana ne-Stardew Valley ne-Cattails, nokho iyakwazi ukugqama ngokwayo ngokwenza okuthile okuhlukile.
Vele ungakhohliswa amakhithi opopayi; lokhu ukulingisa kokuphatha okunokujula kwangempela, ukukhetha okungapheli kokwenza ngokwezifiso, kanye ne-pantry echichimayo egcwele amaresiphi ongawahlola.
Uma konke lokhu kuzwakala njengokuthile ongakuthakasela, qhubeka ufunda ukuze uthole idethi yokukhishwa kwe-Cat Cafe Manager.
I-Cat Cafe Manager izokhishwa ku-Nintendo Switch ngo-April 14. Lokho kusho ukuthi kuzodingeka ulinde izinyanga ezimbalwa uze uqale ukunwaya isisu futhi udale ubuciko obuyigwebu le-latte ku-sim yokuphatha ethandekayo ye-Roost Games. Ikhefi yekati kanye neCaterwaul Village kuzoba yikhaya lethu elisha kude nasekhaya, futhi asisakwazi ukulinda ukuze sizinze.
Lapho ufika, i-cafe ididekile futhi ishiywe isikhathi esithile, kodwa akuyona into yokuthi i-elbow grease (nemali) ayikwazi ukuphulukisa.
Hlobisa futhi wandise ikhefi ngendlela oyibona ifanelekile ngemva kokuba isilungisiwe futhi uzobe udale indawo yokuphumula ukuze amakati - nabantu - bayijabulele.
Khulisa ikhono lakho lokuqasha nokugcina abasebenzi abaqeqeshiwe ngokulawula umthwalo wabo wokusebenza nokubasiza ekuthuthukiseni amakhono abo
Ukudla kwangokwezifiso nezinye izinto zemenyu eziklanyelwe izidingo ezithile zamakhasimende akho kuzothuthukisa umuzwa wabo wekhefi
Yilokho Konke Mayelana Nomphathi Wekati Cafe. Hlala ubukele ukuthola izibuyekezo eziningi futhi ubeke uphawu kusayithi lethu ukuze uthole izindaba ezengeziwe. Ngiyabonga Ngokufunda!
I-Uragun Ibambezelekile Kuze kube ngu-Ephreli!
I-Chrono Cross: I-Radical Dreamers Edition - Esikwaziyo Kuze kube manje
Emuva 4 Igazi: Imigudu ye-Terror DLC Idethi yokukhishwa!
I-villain Esithanda Ukuyizonda: Black Adam